Gabayga ma la baran karaa? | Heeshi
Gabayga ma la baran karaa?
Jimce, Oktoobar 12, 2012 ·	by Idiris M. Cali ·	in Maqaallo	· 2 Faallo
Walaalkay, oo aan Soomaalinnimada ku walaalownay, Mahad ayaa dhambaal jacnabeed (electronic mail; dhanjac = email) igu weydiiyay, “[G]abayga ma loo dhashaa mise waa la bar[an] karaa?” Warcelinta weydiintaas waxaa ka dhashay dhawr dhanjac oo aan ku qaadaadhigay waxa ay maansadu tahay iyo sida dhismaheeda loo baran karo. Faafinta dhanjacyadan dambe waan ka gaashaantay, oo waxaan qoray, “[F]adlan macluumaadka aan halkan ku wadaagayno labadeenn[u]ba aan wada ilaalinno, oo aan ka ilaalin[n]o soo daabicidda erey-ka-erey oo minguursan. Waxa dhici karta in aan khaladaad badan oo kama’ ah aan ku dhaco; mana doonayo in ay khaladaad[yadaydaa]su faaf[aan].” Hayeeshee, dhanjacii koobaad ee xambaarsanaa warcelinta weydiinta Mahad waa uu ka madax bannaanyahay xayndaabka aan saaray dhanjacyadaas kale; sidaas daraaddeed, isagii oo aan ereyna ka baddalin ayaa halkan hoose ku soo wadhan:
Waan ku salaamay Mahad,
Sida aan anigu qabo, jawaabta su’aasha ah “Gabayga ma loo dhashaa, mise waa la baran karaa?” waa Maya iyo Haa. Wax loo dhasho dunidan ma jiraan; balse waxayow waa lagu dhashaa, sida: xubnaha jidhka, nooca dhiigga iyo qayb weyn oo kamid ah garashada (cognition). Wax walba barasho ayuun baa lagu taabaa. Gabaygana barasho iyo dedaal ayaa lagu hidiyaa.
Doodda ah in gabayga loo dhasho waa mid aan weli baadhis xaqiiqo ah (scientific) lagu difaacin. Ogowna, la ma hayo qof markii u dhashayba gabay oodda ka qaadey. Waxa la sheegaa in uu Dhoodaan oo 16 jir ahi ku hadal-furtay gabay isaga oo leh:
Adoo miciyo dhoo[bdhoo]banoo, dhoollo habareed leh
Dhiilkiin[n]i qaaloof maxaa, dhalada kaa saaray (Doollo.com)
Dabcan, Dhoodaan iyo kumaankunka kale ee gabyey (ee mootan ammaba nool) waa ay barteen gabayga, ee kuma aysan soo dhalan. Inay gabay laxni la’ tiriyaanna waxa sahlay ogaanshahoodii ay ogaayeen wadiiqooyinka uu gabaygu leeyahay dhisme ahaan. Ogaalshahanina kuma iman duruus iyo cilmi jaamacad lagu qaato (i.e. Tiraynta Maansada), balse waxa uu ku yimid u dhuun-daloollaanta wadiiqooyinka gabaygu leeyahay. Tanina waxay suubsantaa oo qudha markii aad gabay iyo meel uu ku noolyahay dhexjoogto, oo aad hadiyo goor maqlayso gabay la tirinayo.
Haddaba, adiga oo aan u dhuun-daloolin habdhaca gabayga inaad gabay gabay ah curiso waa xaasha’. Maaha inaadan kolkaa waxbaba curin karin. Balse waa in waxa aad curisaa uu laxni ka buuxo. Mana garan kartid si’aad laxnigaa iskaga qabato; maba garan kartid in aad wax laxmiyeyso.
Marka, waa in aad barataa, oo ay maskaxdaadu u debecdaa, hannaanka iyo habdhaca uu gabaygu u hoorsamo. Labadaba, hannaanka iyo habdhaca, waad baran kartaa; waxaadna ku baran kartaa aqoonta Miisaanka Maansada. Balse intaadan aqoontan u guda galin, waa in ay dhegtaadu in badan maqashaa gabayo la tirinayo. Isku day inaad wax tiriso, ka dibna ku noqo aqoonta Miisaanka Maansada oo isa sax. Kana digtoonow, aqoonta Miisaanka Maansada ku baran maysid si’aad gabay dhan oo dhammays tiran, isla markaasna murti badan oo sarreeya, u allifi karto. Waana garashadaada iyo farshaxankaaga waxa tan dambe kaa giijin kara.
Ogaanshahayga, qofkii ugu horreeyey ee si dhiirran u caddeeyay in gabyiddu (amma maansayntu) ay tahay wax la iska doon-dooni karo, oo barasho lagu taabi, waxa uu ahaa Eebbe haw naxariistee abwaankeennii innaga laqmaday ee Abwaan Maxamed Xaadhi Dhammac (Gaarriye). Waa run, oo sida la isku baro xifdinta Qur’aanka ayaa la isku bari karaa curinta maansada. Waxaa se taas kaa xiga helista maansadhaarri Gaarriye oo kale ah, oo bare kuugu noqda curinta maansada. Waayo, maansada dhismaheeda ood barato waxaa kuu dheer murti-saaristeeda, oo ay ugu horrayso adeegsiga higillada wax-sheegga (hummaagyeynta). Waxay se ugu dambaynta isugu soo gororaysaa dedaalkaaga aad ku soo saari karto hibada hal-abuurnimo ee Eebbe kugu beeray.
Tilmaamayaal: Barasho, Dhalasho, Gabay, Maanso, Suugaan
SEID A. ABDI · Jimce, Nofeembar 30, 2012 - 9:12 G · Halcelin→
Idriis! Si wacan baad u faalleysay..Saabsanahan ahaa Gabayga Ama Maansada miyaa lagu soo dhashaa, mise waa la bartaa?
Abwaannada ama Sugaanyahannada tookhaya ayaa dhaha “Waa hooddo!” Oo ka dhigan waa HIBO EEBBEH BIXIYO!
Waa run! Sida Eebbeh Qur’aanka ku tiraabay “Wa Maa Calamnaahu Al-Shicra Wa Maa Yanbaqii Lahu..”[DEERKA:YAASIIN] -Tusmadaas ama Aayadaas oo uu Eebbeh kaga waramayo Nebi Muxamed C.S.S. In aanuu Eebbeh barin Gabayga, balse Qur’aanku ahaaday ARKAAGGII(Mucjisadii/The Miracle) NEBI MUXAMED C.S.S. lagu soo dejiyay, oo aan sinaba Qur’aanka oo kale la soo taawin karin.Waxa si dadban ugu tiraaban tusmadaas in dhanka kale uu Eebbeh hab geyeysiin ah ku baro, qofka gabyaaga ah gabayga, oo uu ka mid yahay hooddooyinka Eebbeh bixiyo, ee aftahamo, oo uu yahay wax Eebbeh u qadaray qofkaas abwaanka ah.
Xaga barashada waa suday, hubsiimo tilmaamtay, inaan qofna ku soo dhalanin kasmada ama aqoonta uu ku hilan yahay, balse ay ku biirtay, waa hubaal taasu.
Idiris M. Cali · Sabti, Diseembar 1, 2012 - 4:36 G ·
Waa Xaqiiqo in Eebbe yahay Barbaariyaha dadka bara wax aysan hore u aqoon—maanso-curinta ku dhahoo.
Gabyaa Aadan Carab, oo taas horena rummaysan, aragtida maqaalkanna heer-sare u qaadaya ayaa leh:
Amba kama mahoobbiyin tolkay, maansadaa badane
Masar iyo Kharduumna uma tegin, manaw masaafoonne
Kama mudannin Shiikh ii marshoo, macrifo iy dheere
Waan mihindisee iima dhigin, macallin yeedhshaaye
Waa shay Maqaaddiir ku yimid, oon yar maammulaye
Taasi waa aragtida hal Gabyaa. Waanan ku raacsanahay, oo si kasta oo loo barto dhismaha maansada, haddana Eebbe wax uu oggolaado uun baa jiraya; wax kaloo dhanna ma suubsami karaan!
← Booliquutanimada aragtiyaha: Ma dhayalsi baa, mise waa dhagris?
Wadahadal si’aysan →